Mamoaka hira ao amin’ny YouTube ny kintan’ny pop malaza ao Japana ho famelombeloman’aina mandritra ny fihibohana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Mey 2020 6:48 GMT
Inaba Koshi mpihiran'ny B'z. pikantsary avy amin'ny lahatsary YouTube “B'z LIVE GYM 2019 whole lotta NEW LOVE“.
Rehefa nandany herinandro maromaro toa tsy nihevitra ho henjana ny haratsian'ny krizin'ny COVID-19, tamin'ny 16 Aprily ny governemanta japoney [vao] namelona ny hamehana manerana ny firenena ka ao anatin'izany ny fipetrahan'ny olompirenena an-tsitrapo any an-tokantrano. Ampirisihana ihany koa ny mpiasa afaka mamita ny asa avy any an-trano hanao izany, ary kiviana ny olona manerana ny tongoronosy tsy hivory ankalamanjana, dia eo ho eo ihany ny vokatra naterak'izany.
Rehefa nofoanana moa izany ny fitetezan-kianja fanao isaky ny lohataona sy ny andro mafana, dia maro ireo kintana malazan'ny pop japoney no nanapa-kevitra ny hanainga ny toetsain'ny mpankasitraka mihiboka an-trano amin'izao fotoana izao, ka ny ataon-dry zareo amin'izany dia ny famoahana manontolo ny kaonseritra sy ireo rakikira izay jerena maimaimpoana ao amin'ny YouTube.
Tarika nahalafo hira ambony indrindra hatramin'izay nisian'i Japana ary iray amin'ny nahatratra ny tampony ara-kira teto ambonin'ny tany, olona roa no miara-mihira mandrafitra ny B'z, dia i Inaba Koshi sy i Tak Matsumoto. Ao anatin'ny style [angeson'ny] hard blues rock ahitana taratra be dia be avy amin'ny tarika Aerosmith sy ireo tarika amerikana mitovitovy aminy tamin'ny taompolo 1970s sy 1980s, malaza amin'ny fampisehoana mampiasa angovo ambony mandritra ny fampisehoana ry B'z.
Ho fanampiana ireo Japoney mpankasitraka azy ireo hiatrika ny rarintsaina ateraky ny coronavirus, dia namoaka fampisehoana “live gym” manontolo maro tao amin'ny fantsona YouTube ry zareo, ao anatin'izany ireo vao navoakany farany indrindra vao haingana, “LIVE GYM 2019 whole lotta NEW LOVE,” izay mandrakotra ny andiam-pampisehoana nataon-dry zareo tamin'ny taona 2019.
Tarika mpihira iray hafa anisan'ny malaza indrindra ao Japana, in-telopolo no laharana voalohany hatrany amin'ny singles amin'ny fandaharan-kira Japoney ry Mr. Children hatramin'ny niforonany tamin'ny taona 1989. Feno hipoka hatrany isaky ny mitety ireo kianja goavana manerana an'i Japana ity tarika naka aingam-panahy pop avy amin'ny tarika Beatles ity, saingy rehefa tsy misy ny fitetezan-tany nokinasa nandritra ny COVID-19, dia namoaka rakikira miisa roapolo tao amin'ny YouTube ny tarika, ary namoaka lahatsarin-kaoseritra misy fizarana roa ihany koa.
Raha tsy fantatra loatra ivelan'i Japana, ny lazan'ny menavazan'ny fanoratan-kira sady mpihira Okuda Tamio ho mpihiran'ny mpihira [na ho mpihira tsara indrindra] no nahatonga ny fisian'ireo gitara klasika Gibson hitovy endrika tanteraka amin'ny gitarany. Raha fantatra indrindra amin'ny blues sy ny pop-rock i Okuda dia namoaka ny “Simple Virtual” (カンタンバーチャビレ) tao amin'ny YouTube.
Heverina ny hisotroronono amin'ny faran'ny taona 2020 i Arashi (嵐, midika hoe “tafiotra”), raha tarika tovolahy malaza natsangana sy notantanin'ny sampana mpanjakan'ny fanangonana manantalenta ao amin'ny Johnny's & Associates. Namoaka lahatsarin-kaonseritra maro tao amin'ny YouTube ny tarika. Ho fandraisana anjara amin'ny ady amin'ny COVID-19, nandrakitra lahatsary hampiroboroboana ny fanasana tanana ihany koa ny tarika.
Hikawa Kiyoshi, iray amin'ireo mpihira enka malaza indrindra ao Japana, no namoaka lisi-kira miisa 21 hanamarihany ny 21 taona nijoroany tao amin'ny fihariana ara-kira, sy ho fanohanany ny mpanohana azy ao anatin'izao areti-mandringana COVID-19 izao. Ny hira ahafantarana azy dia ny “Tokimeki Rumba” (Rumba mihofahofa), tamin'ny taona 2009.
Tahaka an'i Arashi, tarika hafa novolavolaina ny NMB48 (“N.M.B. Forty-eight”), saingy tarika pop malaza sy mitrifana. Ao Namba, Osaka, any andrefan'i Japana no misy ivon'ny ankamaroan'ireo mpankasitraka azy. Nanam-pikasana ny hamoaka hira tokana (single) ny tarika tamin'ity volana mey ity, saingy nanery azy ireo hanemotra ny kinasany ny COVID-19. Nataon'ny tarika NMB48 kosa ny nandrisika ny mpiondana azy ireo “hijanona ao an-trano” amin'ny famoahana lisi-kira maro manasongadina rakikira an-tsary am-polony, ka ao anatin'izany ny “Satria, Satria, Satria” (だってだってだって).
Simba hatramin'ny taona 2007 taorian'ny fahafatesan'ilay lehiben'ny tarika Izumi Sakai, farafahakeliny albums 37 tapitrisa no lafon'ny tarika ZARD. Namoaka hira 17 ny mariky ny tarika, ka ao anatin'izany ilay gadona ahafantarana ny “Don't Give Up!” (負けないで) ao amin'ny YouTube ho fanohanana ireo mpankasitraka miaina ao anatin'ny areti-mandringana COVID-19.